विदेशी बुहारीलाई पीआर दिऊँ : नवराज सिलवाल – Nepal's No. 1 Digital Newspaper, Business News, Tourism News, Sports News, Entertainment News, Tourism Year 2020, digitalkhabar.com …express media network
Home / समाचार / विदेशी बुहारीलाई पीआर दिऊँ : नवराज सिलवाल
विदेशी बुहारीलाई पीआर दिऊँ : नवराज सिलवाल
By Digital Khabar on २६ भाद्र २०७६, बिहीबार ०८:३०
काठमाडौँ– संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउने प्रयास बिहीबार पनि असफल भएको छ । समितिको बिहीबारको बैठकमा पनि समिति सदस्यहरुबीच वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताबारे फरक–फरक धारणा आएपछि शुक्रबार सम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ ।
बैठकमा अधिकाँश सदस्यहरुले विदेशी बुहारीलाई ५ बर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने अडान राखेका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद नवराज सिलवालले सर्वाधिक विवादको विषय बनेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका बारेमा बोल्दै विदेशी बुहारीलाई पीआर का आधारमा राजनीतिक बाहेक अन्य अधिकार दिन सकिने बताए ।
‘संसारका अरु देशमध्ये नेपाल नारिकताको विषयमा धेरै उदार देखियो । वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताका सवालमा विहे गरेर आउने विदेशी बुहारीलाई पनि पीआरको व्यवस्था गरौ र त्यसैका आधारमा अरु अधिकार दिने व्यवस्था गरौ’ सांसद सिलवालको भनाई थियो ।
त्यस्तै बिहीबारको छलफलमा भाग लिदै नेकपाका अर्का सांसद जनार्दन शर्माले नागरिकता विधेयमा सरकारलाई भाषा मिलाउन सुझाव दिए । यो विधेयकमा नेपालीसँग विवाह गरेर आएका महिलालाई कति समयपछि मात्रै नागरिकता दिने भन्नेमा सांसदहरुबीच विवाद छ ।
पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका शर्माले वैवाहिक जीवनमा व्यवहारिक संकट नआउने गरी समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘कुन देशमा के छ भन्ने भन्दा पनि हामी यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा केन्द्रीत हुनुपर्छ । अरु देशका उदाहरण लिनु एउटा कुरा हो तर त्यही देशको जस्तो हुनुपर्छ भन्ने छैन’ शर्माको भनाई छ ।
यो विधेयक संसदको चालू अधिवेशनबाटै पास गर्ने तयारी भएपनि सहमति नजुट्दा लम्बिदै गएको छ । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले शुक्रबारको छलफलपछि निर्णयमा पुग्ने बताइन् । #राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति#नवराज सिलवाल
← Previous Story अङ्गीकृत नागरिकताबारे समितिमा चर्काचर्की, विदेशी बुहारीलाई बिहेको १५ वर्षपछिमात्रै नागरिकता !
Next Story → सफा र स्वच्छ वायु भएको काठमाडौं बनाउन कार्ययोजना